Guddiga Dalxiiska Afrika “One Africa” ayaa hadda haysta Dhegaha Furan ee Bulshada Bariga Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddiga Dalxiiska Afrika “One Africa” ayaa hadda haysta Dhagaha Furan ee Bulshada Bariga Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wtn
Guddiga Dalxiiska Afrika “One Africa” ayaa hadda haysta Dhagaha Furan ee Bulshada Bariga Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika wuxuu ku guulaysanayaa hadafkiisa ah inuu isu keeno goobaha dalxiiska Afrika si kor loogu qaado qaaradda ama gobollada qaaradda oo ah hal dalxiis.
Wadamada xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika ayaa hadda ka wada shaqeynaya sidii dalxiiska loogu suuqgeyn lahaa sidii ay u ahaan lahaayeen bandhigga dalxiiska gobolka ee sannadlaha ah ee dhowaan la bilaabay, kaas oo looga golleeyahay in kor loogu qaado tirada dalxiisayaasha booqanaya gobolka ka dib burburkii COVID-19.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waxay ka qaybgashay bandhiggii ugu horreeyay ee dalxiis goboleed ee dalalka xubnaha ka ah Bariga Afrika.
Guddoomiyaha ATB Mr. Cuthbert Ncube ayaa gacan ka gaystay Expo -kii Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika ee ugu horreeyay (EARTE) oo dhammaaday toddobaadkii hore ka dib saddex maalmood oo ganacsi ah.
Cuthbert Ncube, guddoomiyaha ATB wuxuu muujiyey intii lagu jiray bandhigga in Ewadamada xubnaha ka ah Ururka Bulshada Afrika (EAC) waxay qaadeen talaabadii saxda ahayd ee ku wajahnayd ujeeddada ajendaha Afrika si ay EAC u noqoto koox isku bahaysanaysa hab loo dhan yahay oo si wanaagsan loo agaasimay si loo horumariyo Dalxiiska Afrika.
Bulshada Bariga Afrika (EAC) waa urur goboleed ka kooban 6 Dawladood oo Iskaashi la leh: Jamhuuriyadda Burundi, Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Midowday ee Tansaaniya, iyo Jamhuuriyadda Uganda, oo xarunteedu tahay Arusha, Tanzania.
Wuxuu sheegay in ATB ay si dhow ula shaqeyn doonto xubnaha EAC si kor loogu qaado horumarka deg -degga ah ee dalxiiska gobolka ee ururka.
Madaxweynaha Zanzibar Dr. Xuseen Mwinyi ayaa daaha ka rogay daacuun si uu u bilaabo Bandhigga Dalxiiska Gobolka Bariga Afrika (EARTE) oo sannad walba noqda mid wareegsan oo ka dhex dhaca waddan kasta oo xubin ka ah ururka EAC.
Dr. Mwinyi wuxuu sheegay in dowladaha shuraakada ah ee EAC looga baahan yahay inay dib u qeexaan oo ay dib u eegaan siyaasadaha dib u dhigaya horumarinta dalxiiska ee gobolka ee badeecadaha iyo adeegyada dalxiiska ee la midka ah.
Bilaabidda EARTE sanadle ah ayaa u furi doonta waddooyin cusub gobolka EAC oo sahamin doona waddooyin iyo xeelado cusub oo gobolka u suuqgeyn doona hal meel, ayuu yiri Mwinyi.
Duurjoogta, sifooyinka dabiiciga ah oo ay ku jiraan buuraha, badweynta iyo xeebaha, dabeecadda, iyo goobaha taariikhiga ah ayaa ah meelaha ugu soo jiidashada badan dalxiisayaasha u soo jiidaya inta badan booqdayaasha ajnabiga iyo kuwa gobolka gobolka EAC.
Xayiraadaha bixinta safarka iyo fiisooyinka, isuduwidda la'aanta ka jirta gobolka EAC ayaa dib u dhac ku ah horumarinta dalxiiska gobolka.
Dawladaha shuraakada ah ee EAC waa inay dib ugu laabtaan guddiyadoodii sawirrada si ay u badbaadiyaan waaxda dalxiiska iyagoo si dhakhso leh ula socda gabagabada Borotokoolka EAC ee Maareynta Dalxiiska iyo Maaraynta Duurjoogta, sidoo kale waxay xoojinayaan Kala-soocidda xarumaha hoyga Dalxiiska, xubnaha Golaha Sharci-dejinta Bariga Afrika ( EALA) waxay u soo jeedisay dawladaha EAC.
La'aanta hab is-weydaarsi iyo hab-is-weydaarsi macluumaad oo digitized ah oo loogu talagalay horumarinta fiisayaasha dalxiiska ee wadajirka ah ayaa si weyn u saameeyay horumarka dalxiiska gobolka, inta badan xilligii masiibada COVID-19.
Xoghayaha Guud ee EAC Dr. Peter Mathuki ayaa sheegay in imaatinka dalxiisayaasha caalamiga ah ee gobolka EAC ay si isdaba joog ah u kordhayeen iyagoo leh heerar kala duwan oo ka jira dowlad -wadaag kasta. Waxay gaartay 6.98 milyan sanadka 2019 ka hor inta uusan dillaacin COVID-19.
Tirada dalxiisayaasha imanaya gobolka EAC ayaa hoos ugu dhacay qiyaastii 67.7 boqolkiiba sanadkii hore (2020) ilaa 2.25 milyan oo dalxiisayaal caalami ah, oo lumiyay 4.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah oo ka soo gala dakhli dalxiis.
Gobolka EAC wuxuu horey u saadaaliyay inuu soo jiidan doono 14 milyan oo dalxiisayaal ah sanadka 2025 ka hor inta uusan dillaacin COVID-19.
Horumarinta xirmooyinka dalxiiska ee meelo badan loo tago iyo fursadaha maalgashiga dalxiiska iyo dhiirrigelinta, la-dagaallanka ugaadhsiga iyo ka ganacsiga duur-joogta sharci-darrada ah ayaa ahaa xeeladaha muhiimka u ah horumarinta dalxiiska gobolka, ayuu yiri Dr. Mathuki.
Faafitaanka COVID-19 wuxuu si xun u saameeyay faa'iidooyinka dalxiiska oo leh shaqooyin iyo dakhli aad u ballaaran, sidoo kale wuxuu wiiqay dadaallada ilaalinta duurjoogta sababtuna tahay hoos u dhac ku yimid khidmadaha laga soo ururiyo booqdayaasha Beeraha Qaranka iyo goobaha dhaxalka.
Xayiraadaha safarka ee dalxiisayaasha ka soo gudbaya xuduudaha EAC ayaa si weyn u saameeyay dalxiiska xudduudaha ka tallaaba, ka dib waxay caqabad ku noqdeen dhaq-dhaqaaqa dalxiisayaasha caalamiga ah iyo kuwa gobolkaba inay soo galaan dalalka dariska ah, inta badan Kenya iyo Tanzania oo wadaaga meelaha soo jiidashada leh.
Iyada oo laga jawaabayo faafitaanka cudurka faafa, Xoghaynta EAC waxay diyaarisay Qorshe Dib-u-soo-kabashada Dalxiiska oo gobolka ku hagi doona qaadashada dalxiiska dib ugu noqoshada heerarkii hore ee masiibada.
Wadamada xubnaha ka ah Bariga Afrika waxay la wadaagaan dalxiiska iyo duurjoogta sidii khayraadka guud iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqyada xuduudaha ee duurjoogta, dalxiisayaasha, hawl wadeennada dalxiiska, shirkadaha diyaaradaha, iyo milkiilayaasha hoteellada.
Buurta Kilimanjaro, deegaanka deegaanka Serengeti, Mkomazi, iyo Jardiinooyinka Qaranka Tsavo, xeebaha Badweynta Hindiya, jardiinooyinka chimpanzee iyo gorilla ee Galbeedka Tansaaniya, Rwanda, iyo Uganda ayaa ah furaha ugu horreeya ee hormuudka u ah ilaha dalxiiska gobolka ee ay wadaagaan dalalka xubnaha ka ah EAC.
Golaha dalxiiska iyo wasiirada duurjoogta ee EAC ayaa ansixiyay July 15th sannadkan, Bandhigga Dalxiiska Gobolka ee EAC (EARTE) oo ay martigelin doonaan dawladaha shuraakada ah si ku -meel -gaar ah.